Politika Fiarovana fiainan'olona - InstaZOOM
Ny fiainanao manokana
Manome lanja ny fiainanao manokana izahay. Mba hiarovana ny tsy anaranao dia tianay ny mampahafantatra anao ny fomba fanaonay momba ny fampahalalana an-tserasera sy ny safidy anananao momba ny fanangonana sy fampiasana ny angonao. Ataonay ho hita ao amin'ny tranokalanay sy any amin'ny toerana rehetra azo angatahana ny angon-drakitra manokana ity fampandrenesana ity mba ho mora hita.
Ny Google Adsense sy DoubleClick DART cookies
Ity tranokala ity dia mampiasa cookies avy amin'ny Google, mpanome dokambarotra antoko fahatelo, mba handefasana doka. Mampiasa cookies DART i Google mba handefasana doka amin'ny olona mitsidika ity tranokala ity sy tranokala hafa amin'ny Internet.
Azonao atao ny manafoana ny fampiasana cookies DART amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ity adiresy manaraka ity: http://www.google.com/privacy_ads.html. Ny fihetsiky ny mpampiasa dia arahina amin'ny alàlan'ny cookies DART, izay iharan'ny politikan'ny tsiambaratelon'ny Google.
Ny cookies dia ampiasain'ny mpizara dokambarotra fahatelo na tambajotra fanaovana dokambarotra mba hanangonana vaovao momba ny asan'ny mpampiasa amin'ity tranokala ity, ohatra. B. Firy ny olona nitsidika ny tranokalanao ary raha nahita dokambarotra mifandraika izy ireo. Instazoom.mobi tsy manana fahafahana miditra na mifehy ireo cookies ireo, izay mety ampiasain'ny antoko fahatelo.
Angonina ny mombamomba manokana.
Raha ianao instazoom.mobi tsidiho, ny adiresy IP an'ny tranokala ary ny daty sy ny fotoana fidirana dia voarakitra. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina handinihana ny lamina, hitantanana ny tranokala, hanara-maso ny fihetsiky ny mpampiasa ary hanangona angona demografika ankapobeny ho an'ny fampiasana anatiny. Ny tena zava-dehibe dia tsy mifandray amin'ny mombamomba ny tena manokana ny adiresy IP voarakitra.
Rohy mankany amin'ny tranokala ivelany
Nanome rohy eto amin'ity tranokala ity izahay mba hahamora sy ho azo ampiasaina. Tsy tompon'andraikitra amin'ny politikan'ny tsiambaratelon'ireo tranonkala ireo izahay. Tokony ho fantatrao fa mety tsy mitovy amin'ny antsika ny politikan'ny tsiambaratelon'ireo tranonkala ireo.
Ity fanambarana ity dia azo havaozina amin'ny fotoana rehetra araka ny fanapahan-kevitray. Raha manana fanontaniana momba ny politikan'ny fiainana manokana amin'ny instazoom.mobi azafady mba mifandraisa aminay amin'ny [email voaaro]